के यि माताले गरेको भविष्यवाणी मिल्ला त! गरिन सनिशले भ्वाईस अफ नेपाल जित्ने धोषणा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । चर्चित रियालिटी सो द भ्वाइस अफ नेपालको मञ्चमा अहिले १० जना प्रतिस्पर्धीको घम्साघम्सी छ । यिनै प्रतियोगीमध्ये एक जना भ्वाइस अफ नेपालको विजेता बन्नेछ । अतः विजेताका लागि अब चार जना निर्णायकले निर्णय दिन सक्ने छैनन् । भोटिङका लागि एस एम एस मार्फ़त र प्रभु–पे मोबाइल एप डाउनलोड गरी दर्शकले आफूलाई मन पर्ने प्रतियोगीलाई भोट गर्न सक्नेछन् । प्रतियोगीलाई विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि भोट गर्न सकिनेछ ।
दर्शककै भोटको आधारमा प्रतियोगीको भाग्य–परीक्षा हुनेछ । १० जना प्रतियोगीमध्ये कम भोट प्राप्त गर्ने प्रतियोगीले मञ्च छाड्नुपर्नेछ । हरेक हप्ता दुई जनाले भोटकै आधारमा मन्च छाड्दै जानेछन् ।
कोच दीप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल, आस्था राउत र राजु लामाको टिममा रहेका तीन–तीन जना प्रतियोगीबीच अबको भीडन्त हुनेछ । अबको चरण भनेको कोचहरुको पनि ढुकढुकी बढाउने हो । उनीहरुले आफ्ना समूहमा सामेल गरेका प्रतियोगीलाई दर्शकले कति रुचाउँछन् भन्ने कुराले पनि कौतुहलता जगाउनेछ ।
कस्ता–कस्ता प्रतियोगी ?
भ्वाइस अफ नेपालको दोस्रो संस्करणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल मात्र होइन, अमेरिकादेखि दार्जिलिङसम्मका प्रतियोगी सामेल भए । उनीहरुमध्ये कतिले भ्वाइस अफ नेपालको आफ्नो यात्रा टुंग्याइसकेका छन् भने कतिपय निरन्तर अगाडि बढ्दैछन् । यस भीडन्तमा मेचु धिमाल, बलबहादुर राजवंशीदेखि याल्की याल्मोसम्म छन् । राम लिम्बु, सशिका सुनुवार राई, गीता शर्मा, विकास लिम्बु अबको भीडन्तका लागि तम्तयार छन् । अञ्जु राना मगर, सनिश श्रेष्ठ, रजनी रिदम राई, सन्जय महत, आरिफ राउफ शीर्ष उपाधिका लागि लड्नेछन् ।
भ्वाइस अफ नेपाल सर्वाधिक चर्चित सांगीतिक रियलिटी शो हो ।
हिमालयन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको प्रतियोगिताको अहिले दोस्रो संस्करण जारी छ । साउनको पहिलो साताबाट सुरु भएको भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ हरेक सुक्रबार र शनिबार साँझ ८ बजे प्रशारण हुँदै आएको छ । दोस्रो संस्करणका लागि देश–विदेशबाट करिब २३ हजार प्रतियोगीले डिजिटल अडिसनमा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमध्ये एक सयभन्दा बढी प्रतियोगीले ब्लाइन्ड अडिसनका लागि मौका पाएका थिए ।
आफ्नो मन पर्ने प्रतिस्पर्धीहरुलाई जिताउनका लागि भोट गर्ने देखी भोटिङ अभियान जारी छ । सबैलाई दोस्रो सिजनको भ्वाईस अफ नेपाल कस्ले जित्ला भनेर कौतुहलता जागिरहेको छ । धैरै आफ्नो आफ्नो लख काटिरहेका छन् । यसै क्रममा एक माताले सनिश श्रेष्ठले द भ्वाईस अफ नेपालको उपाधि जित्ने खुलाशा गरेकी छिन् ।
उनको भबिष्यबाणीलाई मान्ने हो भने सनिशको जित्ने योग रहेको छ । प्रस्तुति पनि राम्रो छ । अरु प्रतिस्र्धीको योग ठिक ठिकै छ रे । तर माताको भनाईलाई आधार मानेर भोट चाँहि गर्न छोड्नु हुन्न है, शुभेच्छुकहरु भन्छन् ।